ဒုက္ခသည်များအတွက် သတင်း အချက်အလက်များ | AAR - သတင်းနှင့် ပြန်ကြားရေးဌာန
← ပိုက်လိုင်း စီမံကိန်းကြောင့် မြန်မာတိုင်းရင်းသားများ အဆိုးရွားဆုံး အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်ခံရ
တရားခံ ဘယ်သူလဲ →
ဒုက္ခသည်များအတွက် သတင်း အချက်အလက်များ
မတ်လ ၃၁ ရက်၊ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်။
မလေးရှားနိုင်ငံ ဒုက္ခသည်များ မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ဒုက္ခသည်များအားလုံးအတွက် သတင်းအချက် အလက်များကို လွန်ခဲ့သည့် ရက်သတ္တပတ်များမှ စတင်၍ ဒုက္ခသည်များ လက်ထဲသို့ လက်ကမ်း စာစောင်များကို အခမဲ့ ပြန်လည် ဖြန့်ချီနေကြောင်း သိရှိရသည်။
(၁) စေတနာဖြင့် မိမိနေရပ်သို့ ပြန်သွား/ပို့ခြင်း
နောင်အနာဂတ် ကာလတွင် မိမိ တိုင်းပြည်၏ အခြေအနေ ပြောင်းလဲ တိုးတက်လာပါက သင့်တွင် နေရပ်ဌာနေသို့ ပြန်ရန် ဆန္ဒရှိရမည်။
(၂) တစ်ရပ်တစ်ရွာ၌ စုစည်းခြင်း
မိမိကိုယ်ကို မိမိ ခိုလှုံနေသော တိုင်းပြည်၌ ရပ်တည်နိုင်ပါက တရားဝင် အခွင့်အရေး တည်မြဲနေ မည်ကို ဆိုလိုသည်။ မလေးရှား အစိုးရနှင့် မဟာမင်းကြီးရုံးမှ ယာယီအားဖြင့် ဒုက္ခသည်များ အတွက် ဖြေရှင်းချက်များ ရရှိရန် ရှာကြံနေပါသည်။
(၃) တတိယနိုင်ငံသို့ လုံခြုံစွာ နေရာချထားရေ
တရားဝင် တခြားနိုင်ငံသို့ နေရာချထာခြင်းကို ဆိုလိုသည်။ ပြန်လည် နေရာချထားရာတွင် ချထားပေးမည့်နိုင်ငံမှ သတ်မှတ်ထားသည့် ဦးရေအလိုက် ပေးကမ်းမှုအပေါ် ဖြေ ရှင်း ပေးခြင်း ဖြစ်သည်။
UNHCR မှ ဝန်ဆောင်မှု ဖြည့်တင်းခြင်း
ဒုက္ခသည်ဟု သင့်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီးမှသာ ဒုက္ခသည် ကဒ်ပြားကို ထုတ်ပေးမည် ဖြစ်သည်။
အစိုးရ ဆေးရုံများတွင် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြု ကဒ်ပြား ရရှိပြီးနောက်ပိုင်းမှသာ ဆေးဝါးကုသမှုများကို ၅ဝ% လျှော့ချပေးမှု။
ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခံရမှုများအတွက် တိုင်ပင် ဆွေးနွေးခြင်း။
အကယ်၍ သင် ဖမ်းဆီးခံရပါက (သို့) အာဏာပိုင်များနှင့် ပြဿနာ ကြုံတွေ့ပါက ရုံးသို့ အကြောင်းကြားပါ။ ရုံးမှ သင့်ကို အကူအညီ ပေးလိမ့်မည်။
ခိုင်ခံသော ဖြေရှင်းချက်ကို တိုင်ပင်ခြင်း။
မိသားစု ပေါင်းစည်းရေးအတွက် တိုင်ပင်ခြင်း။
UNHCR သည် ဒုက္ခသည်အဖြစ် အသိအမှတ်ပြုထားသူများ အားလုံးအတွက် ကြာရှည်ခံ အဖြေရှာဖြေရှင်းပေးရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် ပေးထားသည့် အဖွဲ့အစည်းကြီး ဖြစ်သည်။ ကြာရှည်ခံ ဖြေရှင်ခြင်း (၃) နည်း ရှိသည်။ ၎င်းတို့မှာ မိမိဆန္ဒ အလျောက် မိမိ အမိနိုင်ငံတော်သို့ ပြန်လည်သွားခြင်း၊ လတ်တလော ရောက်ရှိသည့် နိုင်ငံတော်တွင် ရောနှော နေထိုင်စေခြင်းနှင့် လုံခြုံသော တတိယနိုင်ငံသို့ ပို့ဆောင်ပေးခြင်းတို့ ဖြစ်သည်။
မှတ်ပုံတင်ခြင်း/ဒုက္ခသည်အဖြစ် စိစစ်သတ်မှတ်ရေး လုပ်ငန်းစဉ်
မှတ်ပုံတင်ခြင်းဆိုသည်မှာ တိုင်းတပါးတွင် ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူနှင့် UNHCR ရုံးမှ ပထမဆုံး တွေ့ဆုံခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်နေစဉ် မိမိ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို မှန်ကန်စွာ ပေးသွင်းရမည်။ မပြည့်စုံ၊ မမှန်ကန်သော အကြောင်းအချက်များ ပါရှိနေပါက မိမိမှာ နစ်နာသွားဖွယ်ရာ ရှိပါသည်။ တချိန်တည်းမှာပင် သင်၏ ဓါတ်ပုံနှင့် လက်ဗွေကို ရယူသွားမည် ဖြစ်သည်။ မှတ်ပုံတင်ပြီးနောက် သင့်အား ခိုလှုံခွင့် လျှောက်ထားသူ ဖြစ်ကြောင်း ထောက်ခံစာနှင့် ထပ်မံ လာရောက်္က အစစ်ဆေးခံရန်နှင့် သတ်မှတ်ထားသည့် ရက်ချိန်း ကဒ်ပြား/အဖြေ/ဆုံးဖြတ်ချက် ထုတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဒုက္ခသည်တိုင်းတွင် တတိယနိုင်ငံသို့ ချထားပေးရေး ရရှိရန် အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ထိုအခွင့်အရေးသည် သီးသန့် အချိန်နေရာအရ ဆောင်ရွက်ပေး ကိုင်တွယ် ဖြေရှင်းနည်း တစ်မျိုးသာ ဖြစ်သည်။
မိမိနိုင်ငံတွင် ဖြစ်စေ၊ မလေးရှားနိုင်ငံတွင် ဖြစ်စေ၊ တထောက်နားခဲ့သည့် နေရာတွင် ဖြစ်စေ မိမိကြုံတွေ့ခဲ့ရသော တုန်လှုပ် ခြောက်ခြားဖွယ်ရာများကို မထိန်မချန် UNHCR ရုံးတွင် အသိပေးစေလိုသည်။
UNHCR ရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုများအတွက် သင့်ထံမှ ငွေကြေးနှင့် အခြားတစ်စုံတစ်ရာ တောင်းဆိုကာ အခွင့်အရေးယူမှုများ ရှိပါက UNHCR ရုံးသို့ ကျေးဇူးပြု၍ သတင်းပို့ပေးပါ။
UNHCR ရုံး၏ ဝန်ဆောင်မှုများ အားလုံးသည် အခမဲ့သာ ဖြစ်သည်ကို အသိပေးအပ်ပါသည်။
အထက်ပါ အကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ အောက်ဖော်ပြပါ လိပ်စာများသို့ စုံစမ်းမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
P.O. Box 10185, 50706, Kuala Lumpur,
Tel: +603-2141 1322
Fax: +603-2141 1780
012-630 5060 (8.00 am- 11 pm)
2141 1332 ext 455 (11.30-4 pm)
Posted on March 31, 2011, in သတင်းကဏ္ဍ. Bookmark the permalink.	1 Comment.
Aung Than | March 31, 2011 at 3:51 PM
Thanks for this kinds of get knowledge from.